अक्सिमिटर : किन प्रयोग गर्ने र कति पर्छ मूल्य ? | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home राष्ट्रिय समाचार अक्सिमिटर : किन प्रयोग गर्ने र कति पर्छ मूल्य ?
काेरोना भाइरसको पुरानो भेरियन्टको महामारी चलिरहेकै बेलामा वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ एवं भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुनसँग कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर आएका बिरामी एकाएक बेहोस भएर ढले ।
सामान्य रुपमा कुराकानी गरिरहेका उनी एक्कासी बेहोस भएपछि तुरुन्त आकस्मिक कक्षमा लगेर उनको शुरुमा अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गरियो । अन्तिममा थाहा भयो कि उनको शरीरमा धान्नै नसक्ने गरी अक्सिजनको मात्रा घटेको रहेछ ।
डा. पुनका अनुसार मानव शरीरमा अक्सिजनको तह घट्दै गएको अवस्थामा फोक्सोमा निमोनियाको असर बढ्दै गएको हुन्छ । जतिबेला मान्छेले आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको महसुस गर्छ, त्योबेलासम्म उसमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गएको हुन्छ ।
त्यसैले त्यही अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम भएको महसुस गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसको मात्रा पत्ता लगाउने प्रविधि हो, अक्सिमिटर ।
अक्सिमिटरले लक्षण नदेखिएका बिरामीको रगतमा रहेको अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्ने काम गर्छ । यही अक्सिमेटरबाट अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्ने विधिलाई अक्सिमेटरी विधि भनिन्छ ।
कोरोना भाइरसको पुरानो भेरियन्टको महामारी चलिरहेकै बेलामा वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ एवं भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुनसँग कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लिएर आएका बिरामी एकाएक बेहोस भएर ढले ।
जानकारहरुका अनुसार घरेलु प्रयोगको लागि खरिद गरिने अक्सिमिटर र अस्पतालमा चिकित्सकहरुले प्रयोग गर्ने अक्सिमिटरको गुणस्तर भिन्न हुन्छ ।
तर कोरोनाका कारण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्नको लागि भने धेरै गुणस्तरको अक्सिमिटर आवश्यक हुँदैन । घरमा आफैंले प्रयोग गर्ने अक्सिमिटरले केवल पल्स अक्सिजन र हृदयको गति मापन गर्छ ।
जबकि अस्पतालमा प्रयोग गरिने भिन्न खालको यो प्रविधिमा भने यसको रिपोर्ट प्रिन्ट हुने खालको प्रविधि हन्छ । यद्यपि केही पल्स अक्सिमिटर सहायक उपकरणहरू अहिले स्मार्टफोनमा पनि जोड्ने गरिएको पाइन्छ ।